Buug Loogu Tallogalay in Carruurta Lagu Seexiyo oo Noqday ka Ugu Iibka Wanaagsan | #1Araweelo News Network
Buug Loogu Tallogalay in Carruurta Lagu Seexiyo oo Noqday ka Ugu Iibka Wanaagsan
Buug ka waramaya sheekooyin carruurta lagu seexiyo oo ka kooban 22 bog oo uu qoray khabiir cilmi-nafsiga ku takhasusay, una dhashay dalka Sweden ee qaaradda Yurub, ayaa noqday ka ugu iibka wanaagsan waqtigan, sida ay sheegtay shirkadda buuggaagta lagu iibiyo ee Amazon.
Buuggan oo la yidhaa Bakaylihii doonayey inuu seexdo (The Rabbit Who Wants To Fall A sleep) oo uu qoray Carl-Johan Forssen Ehrlin, waxaannu qoraagu ballanqaaday in ubadka waqti kasta uu seexinayo, haddii mid mid loo akhriyo kelmadaha ku jira.
Sida qoraagu iftiimiyey sheekooyinka lagu qoray buugga oo ah sheeko carruureed aad u xikmad badan, isla markaana abuuraya in ubadku dhegahooda raaciyaan, kadibna ku luloodaan ayaa keentay in waalid aad u tiro badan iibsado.
Qiima ahaan buuggan oo la siinayo £6 Giniga starliinka Ingiriiska ah, waxa noqday mid caan ah, waxaana Amazon sheegeen inuu noqday buugga kaliya ee qoraagu kaligii u soo gudbiyey ee dadku si toos ah u dalbanayaan.
Agaasimaha shirkadda Amzon ee dalka Ingiriiska ee dhinaca buuggaagta oo magaciisa la yidhaah Alison Forrest, ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horraysay ee qoraa madaxbannaan uu kaalinta koowaad ka galo buuggaagta ugu iibka badan.
“Waa kelmado sheekada ku wanaagsan oo ilmaha ka keenaya hurdo, waxa aan ubadka ka caawiyey in ay degenaan dareemaan, waana qaybo badan oo sheekada ka mid ah,” ayuu yidhi Mr. Ehrlin oo ah khabiir wax ka dhiga Jaamacadda Jonkoping University ee dalka Ingiriiska.
Sidoo kale, waalidka iibsaday buuggan ayaa sheegay in sheekooyinka ku jiraa yihiin qaar ka caawiyey in ubadkoodu si fiican u seexdaan marka loo akhriyo ama looga sheekeeyo, kuwaasoo tilmaamay in buuggan yahay mid aad u qiimo badan.